Somali News 1.11.22
Published January 12, 2022 at 9:29 AM CST
Saraakiisha cisbitaalka Nebraska ayaa ka digaya in nidaamka daryeelka caafimaadka ee gobolka uu si dhakhso ah u buux dhaafi karo labada toddobaad ee soo socda haddii kiisaska fayrasku ay ku sii socdaan xawaaraha ay hadda ku jiraan. Korodhka awgeed, agaasimaha caafimaadka ee Degmada Douglas ayaa soo saaraya amar waji-xidhka magaalada Omaha laga bilaabo habeenka talaadada saqda dhexe.
Xubnaha shaqaalaha ee degmada Sioux City Community School ma la kulmi doonaan shuruudaha tallaalka. Habeenimadii Isniinta, guddiga dugsigu wuxuu arrintii ka saaray ajandaha. Guddoomiyaha guddiga Dan Greenwell ayaa sheegay in hagida sharciga ay xaqiijiyeen in degmadu aysan u baahnayn inay u hoggaansanto waajibaadka federaalka.
Guddoomiyaha South Dakota Kristi Noem ayaa khudbadeedii ugu dambeysay ee Gobolka ee xilligeedii ugu horreeyay ee xafiiska Talaadadii jeedisay. Waxay ku nuuxnuuxsatay falsafada gobolkeeda ee xorriyadda, dawladda xaddidan, iyo mas'uuliyadda maaliyadeed.
Waxay ku riixday canshuur dhimis dheeri ah, sharciga garaaca wadnaha, waxayna dooneysaa in ay meel mariso waxa ay ugu yeertay sharciga ugu adag ee dalka ka mamnuuca ciyaartooyda transgender-ka ah ee ciyaaraha.
Sharci-dajiyayaasha dimuqraadiga ayaa leh iyadoo kiisaska COVID-19 ay sii kordhayaan, Guddoomiye Noem wuxuu iska dhigayaa in khatarta caafimaad ay dhammaatay.
Waxay rabaan inay diiradda saarto arrimaha muhiimka u ah gobolka iyo xorriyadda dadka oo dhan.
Gudomiye Noem waxa kale oo uu ka dhawaajiyay horumarka dhaqaale ee aagga metro ee Magaalada Sioux iyada oo Waqooyiga Sioux City ay ku darayso in ka badan 300 acres beerteeda warshadaha oo ay dhisayso 300 oo guri oo xoog leh.
Gov. Iowa Kim Reynolds ayaa la filayey in ay u doodo canshuur dhimis, xirmo xoog leh, iyo dib u habayn waxbarasho oo gobolka ay ku leedahay ciwaanka habeenka talaadada. (Hadalka waxa uu dhacaa 6pm)